ကိုယျ့အိမျကထမငျးကိုယျစားနရေငျတောငျ တခါတလေ ဘယျသူ့ကို အားနာလို့ နာမှနျးမသိတဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ခံစားနရေတယျဆိုတဲ့ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ – XB Media & News
ကိုယျ့အိမျကထမငျးကိုယျစားနရေငျတောငျ တခါတလေ ဘယျသူ့ကို အားနာလို့ နာမှနျးမသိတဲ့ ခံစားခကျြမြိုးခံစားနရေတယျဆိုတဲ့ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ..
ပရိသတျကွီးရေ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ နှိုငျးရှငျမွငျ့မိုရျ ကတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားတိုငျးမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ကာရိုကျတာမြိုးစုံကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျနဲ့ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျသူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူမဟာရုပျရှငျလောကထဲက ဟာသသရုပျဆောငျ ကိုဘငျးနဲ့အိမျထောငျကခြဲ့ပွီး အခုဆိုရငျတော့ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ကလေးလေးနှဈယောကျနဲ့အတူ သာယာပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နှိုငျးရှငျမွငျ့မိုရျ ဟာလကျရှိမှာတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှု့တှကေို ခဏတာရပျနားထားပွီးတော့ အှနျလိုငျးပျေါမှတဈဆငျ့ သူမရဲ့မိတျဆှတှေနေဲ့ အတူ စြေးရောငျးခပြေးနပေါတယျနျော။ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ နှိုငျးရှငျ ကတော့ ကိုယျ့ထမငျးကိုယျထိုငျစားနရေငျးနဲ့ တဈခါတလေ ဘယျသူ့ကိုအားနာနမှေနျးမသိဘူးလို့ ရငျဖှငျ့လိုကျပါတယျ။
နှိုငျးရှငျ ဟာလကျရှိမွနျမာပွညျမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေး၊ ကနျြးမာရေးတှကွေောငျ့ သူမအပါအဝငျ ပွညျသူတှအေားလုံး စိတျဒုက်ခ‌ရောကျ နေ ရတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ” ငါတို့ရဲ့ ပြျောစရာအခြိနိတှေ ဘယျတော့မြားမှ ပွနျရ‌နိုငျမလညျးးပွနျလိုခငျြမိတယျ…အရငျလို အပူအပငျ မရှိ လှတျလပျစှာ သှားလာရတဲ့ အခွအေနလေေးတှေ…ခရီးတှထှေကျဖို့မပွောနဲ့ ရှတေိဂုံဘုရား တောငျမတကျတာ ကိုဗဈစဖွဈကတညျးက ခုခြိနျထိ…သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှပေီ့း ဟီးဟီးဟားဟား စကားပွောစားသောကျကွရငျး မှနျးကွပျမှု့တှေ ပွောခငျြပမေယျ့လိပျပွာမလုံလို့ မဆုံရဲ ကွ….
ဆိုငျထိုငျ ဘားထိုငျဖို့ နနေသောသာ မှေးနေ့ မဂျလာဆောငျနဲ့ အလှုဖိတျရငျတောငျ လိပျပွာမလုံလို့ သှားဖို့တှေ ပကျြကှကျ ကိုယျ့ထမငျးကိုယျ ထိုငျစားနရေငျးတောငျ တဈခါတလေ ဘယျသူ့ကိုအားနာနမှေနျး ဘာကိုအားနာနမှေနျးမသိတဲ့ဘဝတှေ….အဲ့ လို စိတျအခွအေနတှေနေဲ့ နရေ တာ သိပျအဆငျမပွဘေူးဟာ….အားလုံးသော ဘဝတှေ အရငျလို ပွနိအေးခမျြးကွပါစေ ” လို့ သူမရဲ့လူမှု့ကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားထားတဲ့ သတငျးလေးကို ပွနျလညျမြှဝေ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယ။
စာဖတျပရိသတျကွီးရေ …ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ နှိုငျးရှငျမွငျ့မိုရျ ကတော့ မွနျမာပွညျမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေကွေောငျ့ အဆငျမ ပွတေဲ့အကွောငျးကို ပရိသတျတှကေို ရငျဖှငျ့ရေးသားထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံးငွိမျးခမျြးပါစေ၊ ပွညျသူပွညျ သားအားလုံး စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကိုယ့်အိမ်ကထမင်းကိုယ်စားနေရင်တောင် တခါတလေ ဘယ်သူ့ကို အားနာလို့ နာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်မျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်..
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် ကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကာရိုက်တာမျိုးစုံကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာရုပ်ရှင်လောကထဲက ဟာသသရုပ်ဆောင် ကိုဘင်းနဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်တော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကလေးလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် ဟာလက်ရှိမှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု့တွေကို ခဏတာရပ်နားထားပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် သူမရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ ဈေးရောင်းချပေးနေပါတယ်နော်။ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် နှိုင်းရှင် ကတော့ ကိုယ့်ထမ င်းကိုယ်ထိုင်စားနေရင်းနဲ့ တစ်ခါတလေ ဘယ်သူ့ကိုအားနာနေမှန်းမသိဘူးလို့ ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
နှိုင်းရှင် ဟာလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေကြောင့် သူမအပါအဝင် ပြည်သူတွေ အားလုံး စိတ်ဒုက္ခ‌ရောက် နေ ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ” ငါတို့ရဲ့ ပျော်စရာအချိနိတွေ ဘယ်တော့များမှ ပြန်ရ‌နိုင်မလ ည်းးပြန်လိုချင်မိတယ်…အရင်လို အပူအပင် မရှိ လွတ်လပ်စွာ သွားလာရတဲ့ အခြေအနေလေးတွေ…ခရီးတွေထွက်ဖို့မပြောနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်မတက်တာ ကိုဗစ်စဖြစ်ကတည်းက ခုချိန်ထိ…သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ပီး ဟီးဟီးဟားဟား စကားပြောစားေ သာက်ကြရင်း မွန်းကြပ်မှု့တွေ ပြောချင်ပေမယ့်လိပ်ပြာမလုံလို့ မဆုံရဲ ကြ….
ဆိုင်ထိုင် ဘားထိုင်ဖို့ နေနေသာသာ မွေးနေ့ မဂ်လာဆောင်နဲ့ အလှုဖိတ်ရင်တောင် လိပ်ပြာမလုံလို့ သွားဖို့တွေ ပျက်ကွက် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် ထိုင်စားနေရင်းတောင် တစ်ခါတလေ ဘယ်သူ့ကိုအားနာနေမှန်း ဘာကိုအားနာနေမှန်းမသိတဲ့ဘ ဝတွေ….အဲ့ လို စိတ်အခြေအနေတွေနဲ့ နေရ တာ သိပ်အဆင်မပြေဘူးဟာ….အားလုံးသော ဘဝတွေ အရင်လို ပြနိအေးချမ်းကြ ပါစေ ” လို့ သူမရဲ့လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားတဲ့ သတင်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေ တင်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ။
စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရေ …ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေေ တွေ ကြာင့် အဆင်မ ပြေတဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို ရင်ဖွင့်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ ပြည်သူပြည် သားအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတ ယ်နော်။
ဖုနျးဘလျေ မရှိလဲ သုံးလို့ရမယျ့ VPN နှငျ့အသုံးပွုနညျး လေးမြား မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ